Iindaba-Singahlulahlula njani izinto ezilungileyo nezingalunganga zomkhuseli weglasi wobushushu?
Singahlulahlula njani nje ngokulungileyo kunye nokungalunganga kwesikhuseli seglasi eshushu?
Okwangoku, zininzi iintlobo zeemveliso zokukhusela iglasi enomsindo kwimarike, kwaye abasebenzisi beefowuni eziphathwayo bayakhazimla ngokulula xa bethenga. Singahlulahlula njani nje ngokulungileyo kunye nokungalunganga kwesikhuseli seglasi eshushu?
1. Ukuvuza amanzi. Umphezulu wesikhuselo seglasi esikumgangatho ophezulu onje ngegqabi le-lotus eligcina amanzi ngokugqwesileyo. Ukuwisa amathontsi amanzi kuyo kunokujija kwaye kuqengqeleke ngokukhululekileyo ngaphandle kokushiya umkhondo. Ukuba yimveliso ekhuselekileyo yokukhusela iglasi ekhuselekileyo, ayinayo le ntsebenzo yokuqokelela amanzi.
2. Anti-ekuqaleni. Isikhuseli seglasi esikumgangatho ophezulu esikhuselekileyo sinokumelana kakuhle, kwaye ayizukushiya nayiphi na imikhondo kuyo ngqo ngemela ebukhali njengemela. Ukuba umphezulu wefilimu kulula ukuba ube nomkhondo, emva koko sinokuyikhanyela imveliso. Umphezulu weemveliso ezikumgangatho ophezulu uxhathisa kakhulu ukukrwela.
3. Ubungqina bokuqhuma. Sonke siyazi ukuba isikhuseli seglasi esisezantsi esinokubangela ingozi ebantwini xa sele sophukile. Ukuba sisikhuseli seglasi esikumgangatho ophezulu esikhuselekileyo, ngenxa yeempawu zayo ezilungileyo zokuqhushumba, nasemva kokuba yaphukile, ngekhe kubekho iingozi zokhuseleko, kodwa kuya kubakho ipateni encinci yokuqhekeka. Ukuba ufuna ukuyichonga, unokuyigoba.
Umsebenzi 4 ulula. Kulula kakhulu ukusebenzisa isikhuseli seglasi esinomsindo ukunamathela kwifowuni, yahlukile kumkhuseli wefowuni oqhelekileyo, nokuba iyaqala ukusebenza, inokuba luncedo. Ngethuba nje ulandela ngqo iodolo kwaye uyithumele ngokuchanekileyo, kulula ukunamathela isikhuseli seglasi esishushu somatshini wesandla ngokupheleleyo ngaphandle kokushiya naliphi na iqamza okanye izikhewu.
5.Umgangatho ophezulu wokukhusela iglasi okhuselekileyo uziva ulunge kakhulu xa uchukunyiswa, ukungabikho kakuhle kukubi kakhulu. Isizathu esisisiseko ngumahluko ekwenziweni nakwizixhobo.